China Straight Wire Drawing Machine fekitari uye vagadziri | COREWIRE
Icho chimiro cheiyo yakatwasuka waya muchina isimbi yesimbi yakaputirwa yakatenderedza chivharo cheimwe hurefu uye ndokupinda kune inotevera dhizaini kufa, yakaputirwa pane inotevera block. Iko hakuna pulley, inotungamira roller kana tension roller pakati, iyo simbi waya inomhanya kune yakatwasuka tambo yemabhuroko, ayo anoderedza waya kukotama mukuita kwetambo yekudhirowa. Kunze kwezvo, pachave nekunetsekana kumashure mukudhirowa iyo inokwanisa kudzora simba rekudhirowa, kudzora kusakara kwekudhira uye kuwedzera nguva yekushandisa hupenyu hweiyo kufa, kuderedza kushandiswa kwesimba uye zvimwe zvakanaka.
Wire tambo nzvimbo
Rabha furemu zvinhu nzvimbo
Welding waya nzvimbo
Pre-kushungurudza simbi waya nzvimbo
Chiwanikwa waya nzvimbo
Inoshanda kudhirowa tambo yesimbi simbi, waya yewaya, waya dzesimbi dzetambo, waya fiber simbi waya, CO2 inodzivirira waya waya, inoyerera-cored electrode ye arc welding, alloy isina simbi waya, uye aruminiyamu akapfeka waya, pc simbi waya, uye zvichingodaro.
Yakatwasuka waya yekudhira muchina ndeye yakakwira-inomhanya waya yekudhiza muchina. Yayo mikuru maficha ndeyekuti dhiramu inotora yakamanikana slot mhando yemvura inotonhorera, iyo ine yakanaka inotonhorera maitiro; inotora yekutanga-kirasi yakasimba yakatetepa V-bhandi uye yekutanga-kirasi ndege yakaputira honye giya joiri yekukwira kutapurirana kugona uye yakaderera ruzha; iyo yakazara yakavharirwa dziviriro sisitimu ine chengetedzo yakanaka; mhepo kunetsekana Tuning iri wokurera kuitira yakatsiga mufanidzo.
Yakatwasuka Wire Drawing MachineTechnical Parameter
Model (dhayamita dhayamita) mm
Simba reinopinda waya / MPa
Nhamba ye block
Max. dhayamita yeiyo inopinda waya (mm)
Min. dhayamita yeiyo nzira yekubudisira waya (mm)
Max yekudhiza kumhanya (m / s)
~ Makumi maviri
Kudhira simba (kw)
Kutakura bhanhire regiredhi mbiri; mbiri yekufukidza honye mavhiri; gearbox rine rakaoma zino pamusoro
Nzira yekumhanyisa kugadzirisa
AC Frequency shanduko yekumhanyisa kugadzirisa kana DC yekumhanyisa kugadzirisa
Profibus munda bhazi kudzora system, inobata screen show,
kutaurirana kwevanhu-komputa, kureba-kuregedza kuongorora basa
Spooler kubhadhara-kubhadharwa, yakakwira kubhadharira furemu, "-" mhando kubhadhara,
dhadha-nip kubhadhara-kunze kwekumira basa
Spooler kutora-upstroke kutora-kumusoro, musoro wemusoro kutora, uye vese vanogona kutora-kumusoro waya vasina kumira basa
Kunonoka kumira pane yakatarwa kureba otomatiki, waya yakaputsika bvunzo uye kumisa basa otomatiki,
bvisa chero bhuroka kuti unyore nyowani technical process zvakasununguka,
kunonoka kumira otomatiki kana dziviriro yekudzivirira yazaruka,
kuratidzwa kwemarudzi ese eruzivo rwekukanganisa uye mhinduro,
kuongorora uye kutonga kwese kwese ruzivo rwekumhanya
Mashoko anogona kutorwa
Simbi waya (yakakwirira, yepakati, yakaderera kabhoni simbi waya, isina simbi waya,
pre-makakatanwa simbi waya, bead waya, rabha chubhu waya,
chitubu simbi waya, kodhi waya uye zvichingodaro),
Welding waya (mhepo inodzivirira waya yewaya, yakanyura arc waya yekuwacha, flux cored waya uye zvichingodaro)
waya yemagetsi netambo (Aluminium-yakapfeka waya yesimbi, waya yemhangura, waya yealuminium zvichingodaro)
chiwanikwa waya uye mamwe marudzi esimbi waya
Zvinyorwa: ese ma parameter anogona kuchinjwa zvinoenderana nemamiriro ezvinhu chaiwo
Pashure: Chengetedza Rail Rail Roll Achigadzira Machine
Zvadaro: Electrode Tsvimbo Production Line